पार्टी भन्दा ठुलो कोही छैन : माधव नेपाल, सवै निर्णय बैठकबाटै गर्नुपर्छ : गौतम | Ratopati
काठमाडौ । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी भन्दा ठुलो कुनैपनि नेता हुन नसक्ने बताएका छन् । शनिबारको सचिवालय बैठकमा नेता नेपालले आफ्नो धारणा राख्दै पार्टीमा पार्टी भन्दा ठुलो नेता हुन खोज्ने प्रवृति देखिएको भन्दै पार्टीभन्दा ठुलो कोहीपनि हुन नसक्ने बताएका हुन् ।
‘पार्टी भन्दा ठुलो को हो ? आफूलाई आफैले ठुलो भन्ने ? यस्तो पनि कम्युस्टि पार्टीमा हुन्छ, हुनै सक्दैन । त्यसैले सवैले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ’, नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीप्रति लक्षित गर्दै बैठकमा भने, ‘विधि विधान र पद्धतिअनुसार पार्टी चल्नुपर्छ यसमा कसैले हुदैन भन्न मिल्दैन ।’
त्यसैगरी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले पार्टीमा बैठक बोलाउन ५ जना नेताहरुले बैठकको माग गर्दा पनि तोक आदेश गरिएको भन्दै एक जना सचिवालय सदस्यले बैठकको माग गरेपनि बस्नुपर्ने बताएका थिए । ‘सचिवालय सदस्यले बैठक माग गर्दा बैठक बस्नुपर्छ । तर ५ जनाले बैठक माग गर्दा पनि बैठक बस्दैन भन्ने ? अव सवै बैठकबाटै निर्णय गर्नुपर्छ’, गौतमको भनाइ उदृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने । उनले सहमति गरेर बैठक बस्ने भन्ने ओलीको भनाइप्रति संकेत गर्दै ‘सहमति गरेरर पनि बैठक हुन्छ ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । ‘बैठक बसेर र छलफल गरेर मात्रै सहमति खोज्ने हो ? सचिवालय सदस्यले बोलाएपनि, कुनै एक अध्यक्ष जसले बोलाएपनि बैठक बस्नुपर्छ’, गौतमको भनाइ छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव
प्रचण्डको आरोपको ओलीले गरे ५३ बुँदामा ‘चिरफार’ (पूर्णपाठ)
माधव नेपालसँग धेरै परसम्म यात्रा गर्न सकिन्छ, ओली सत्तामा जान जे पनि गर्छन्ः प्रचण्ड
मालपोत कार्यालय लगनखेलका नायब सुब्बा घूससहित पक्राउ
माधव नेपालको मन किन पोल्छ ?
कागजमा कृषि कम्पनी खोलेर किसान ठग्ने ३ जना पक्राउ